Ndeipi iyo PER uye inoshandiswa sei kushanda pamusika wemusika? | Ehupfumi Zvemari
Ndeipi iyo PER uye inoshandiswa sei kushanda pamusika wemari?
Imwe yematemu ayo anonyanya kushandiswa mumusika wemasheya asi ayo asiri ese madiki uye epakati varimi vanoziva ndiyo PER Huye, iwo ndiwo mazita echiratidzo chii mutengo / muhoro reshiyo mugove. Uye zvine mutsindo kuona kana zviito zvekuchengetedzeka zvakadhura kana zvakachipa uye nekudaro kuita zvakanaka kuvhiya mumisika yemari. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemaitiro ekudyara anonyanya kushandiswa nevashandisi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari. Nekuti kubva ikozvino hauchakwanise kukanganwa kuti iyo PER ndiyo imwe yematanho akakosha pamusika wekutengesa.
Iyi parameter yemusika wemasheya inonyatsoratidza kangani mari yegore yekambani iri kubhadharwa kana uchitenga chengetedzo kubva pairi. Iko semutengo wepamusoro unobhadharwa pamasheya, mukana wekutenda unodzikira zvakanyanya. Nekudaro, zvakakoshawo kwazvo kuziva zvimwe chokwadi chinogona kukanganisa mutengo / mibairo pamugove. Kana chii chakafanana muPER uye chiri icho icho kururamisa iyo yakasangana nesarudzo yakasarudzika yeSpanish equities, iyo Ibex 35, mumwedzi yekupedzisira ya2017 yakaburitsa kuti mazhinji ehunhu akachipa pfungwa iyi.
Kana izvi zvikaitika, imwe yemaitiro aunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda mberi kusarudza kutenga zvichibva pachinhu chakakosha ichi. Hapana mubvunzo kuti ichakwanisa kukubatsira iwe kuita kuti mashandiro aunovhura pasi peiyi kondirakiti system ibatsire. Chaizvoizvo nekuti iwe unenge uine muganho wakakura mune zvingangodaro mabhenefiti aunazvo kubva panguva iyoyo chaiyo. Kunze kwekumwe kwehunyanzvi uye kunyangwe kwakakosha kufunga kweakasarudzwa maitiro. Naizvozvo, iwe unogona kuwana mikana mikuru yebhizinesi kana iwe ukashandisa iyo PER seinongedzo poindi yekudyara mumusika wemasheya. Kunyangwe mumisika yenyika kana kunze kwemiganhu yedu.
1 PER: chii chimiro chayo?
2 Zvakanakira PER
3 Yakanakisa tsika yemunyika stock stock
4 Kukanganisa kwesarudzo iyi
5 Mashandisiro sei paramende iyi?
6 Richava sei gore rino rako rekudyara?
PER: chii chimiro chayo?
Iyo PER chiyero chakasimba kwazvo icho chinoshandiswa mune yakakosha ongororo yemakambani akanyorwa pamisika yemari. Kusvika pakuti iyi paramende yakasarudzika inogona kushandiswa kutenga, kutengesa kana kubata zvigaro. Inogadzira imwe kunongedza uye kuvimbika mukushanda sezvo iri yakavakirwa pane data iri rakabatana zvakanyanya nemutengo wezvikamu. Chinhu chausingazokwanise kuita kubudikidza nenhamba dzinounzwa mukuongorora kwehunyanzvi. Asi kukosha kwayo kunodarika izvi zvinorehwa nezve chokwadi chemakambani aripo mumusika wemasheya.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, iwe unofanirwa zvakare kuve wakangwarira kuti urege kuwira mukukanganisa kusanzwisisika kana musungo unogona kukuita kuti urasikirwe nemari mune chero emabasa akavandudzwa pasi peiyi yakasarudzika nzira yekudyara. Chero zvazvingaitika, kana iwe uchida kuziva kuti chii kuverenga kwehuwandu hwePR, hauzove nematambudziko akawanda ekuziva. Iwe unongofanirwa kupatsanura capitalization yechengetedzo iri kubvunzwa neineti mhindu. PER = Musika capitalization / Net Profit. Kubva pano iwe uchawana izvo kwete ese kukosha yemari dzine zvakafanana PER. Kwete zvishoma.
Kubatsira kukuru kwePER ndechekuti kunobatsira iwe kukoshesa mutengo wekambani, kupfuura kumwe kufunga. Chichava chidimbu cheruzivo zvakanyanya kupfuura zvakanyatsokodzera kukoshesa kukosha kana kuwedzeredza. Uye nenzira iyi, iwe unogona kutora sarudzo nekusagadzikana kukuru mumisika inodiwa yemari. Kune rimwe divi, unogona kuiverenga nekukurumidza uye iwe unogona kusarudza kuti zviri nyore kwauri here kana kwete chero nguva yekutenga zvikamu zvayo. Kunyangwe ichigona zvakare kushandiswa kubuda mumisika zvinoenderana neparamende iyi yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino.
Imwe yemabhenefiti ayo akakosha ndeekuti iyo inokutendera iwe kuti uite fananidzo chaiyo pakati pemaitiro akasiyana-siyana aunayo pane radar yekuita mashandiro. Kusvika padanho rekutaura kuti ndoupi wavo ane mitengo yakanakisa zvichienderana neshanduko yebhizinesi iyi. Mupfungwa iyi, ivo vanonyanya kukosha kutarisisa kururamisa kunoitika mumusika wemasheya. Semuenzaniso, iyo inogadzirwa mumari inoshanduka yenyika semhedzisiro yedambudziko rezvematongerwo enyika rakasimudzirwa muCatalonia. Uye chii chakanganisa iyo Ibex 35 nedonhwe mumitengo yemakambani akakodzera kwazvo.
Yakanakisa tsika yemunyika stock stock
Tichifunga nezve PER, pane akateedzana ezvivigiro ari kutengesa pamitengo inokwezva yekutenga. Kubva pane chaiyo chaiyo ongororo, IAG, Repsol uye ArcelorMittal izvi ndezvimwe zveizvi zvirevo zvaunofanirwa kuvhura zvinzvimbo mumusika wemasheya. Sezvauchaona, iyo PER haina chekuita nemutengo uri wakanyanya kukwirira kana kuderera kwazvo. Iwo akasiyana zvachose parameter kubva pakuona kwekuongorora kwako.
Iwe haugone kukanganwa munzira ipi neipi iyo makambani eIbex 35 anayo anoreva PER nguva gumi nemana, pazasi pakakwirira kwayo uye neyakaenzana makumi matatu emakore. Nekudaro, iwo mutengo / mubairo muyero pane mugove haugare wakafanana, sevamwe vatyairi vangatenda. Asi, zvinoenderana nenguva yemusika wemasheya uye shanduko yekambani pachayo. Kusvika pakuti inogona kusiana kakati wandei mukati megore. Kunyangwe kazhinji pazasi pemakona akanyanya. Iwe unofanirwa kuenda kunozviongorora mune zvakadzama ruzivo kuti uwane mamwe data kuti uite sarudzo yekupedzisira mumisika yemari.
Pane zvinopesana, hazvisi zvese zvivakwa mune iyi mhando yekuongorora. Kana zvisiri, zvinotakura zvimwe zvakaipa zvaunofanira kuziva kubva zvino zvichienda mberi. Imwe yenyaya huru iri mukuti haisi iyo nzira yakakosha yemakambani akanyorwa anonzi cyclicals. Chikonzero chavo chakavakirwa pachokwadi chekuti kambani inogona kuve nePER mukati bhizinesi kutenderera kumusoro uye tarisa zvakachipa. Asi kana hupfumi hwenyika hukachinja, zvinogona kuve zvakapesana. Ndokunge, inodhura chaizvo semhedzisiro yekuderera kwezvehupfumi. Nekuti inogona kukutungamira kuti udzikise purofiti yako mune pfupi nzvimbo yenguva.
Kune rimwe divi, isu hatifanire kukanganwa kuti kudzvinyirira accounting chiito chinogona kuita pasina mubvunzo kukuvadza mukuyera kwayo chaiko. Kupfuura chero chinhu, haufanire kutenga masheya zvichibva paPER chete. Asi pane zvinopesana, iwe unofanirwa kugara uchizvisimbisa pane zvimwe zvekufunga kuti utenge mumisika yemari. Chero zvaive izvi. Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kuti uzvibatanidze pamwe nekuongororwa kwemari kuti uwane zvaunoda. Kwete unilaterally sezvo yako sarudzo inogona kuve nemhedzisiro isingafadzi pane ako mashandiro pamusika wemasheya.
Mashandisiro sei paramende iyi?
Nekudaro, iwo mutengo / mubairo pachikamu chemugove haingoratidzi chete chimiro chechengetedzo yemari. Asi, mhedzisiro yaro mukuwongorora inowedzerwa kune zvimwe zvinoshandiswa mumisika yemari. Semuenzaniso, avhareji PER yemusika, iyo yeakasiyana chikamu kana kunyangwe nhoroondo yepakati PER yesitoko. Sezvauchaona, mashandisirwo ayo anochinja zvakanyanya kupfuura zvaungafunge kubva pakutanga. Kune izvi, zvichave zvakakosha kuti uzive kuti ndeapi ruzivo iwe aunoda kuwana kubva kune ino bhizinesi paramende. Chichava chidiki zvishoma pane chinosungirwa basa kubva zvino zvichienda mberi.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti utore mutemo wegoridhe kuti uite mashandiro pamusika wemasheya. Mukutaura, masheya ayo anotengesa ne PER pasiinowanzoonekwa seyakachipa, nepo masheya aine PER kumusoro inowanzoonekwa seinodhura. Ichi chinhu chinocherechedzwa nevashambadzi vadiki nepakati pakati vasati vaita mashandiro avo mumisika dzakasiyana dzemari. Kunyangwe paine panogona kugara paine dzimwe nguva kutya nekuda kwekukanganisa kwekushandisa iyi nzira yekudyara, sezvatakatsanangurira kwauri.
Richava sei gore rino rako rekudyara?
Kune rimwe divi, uye zvichienderana nemhedzisiro yebhizinesi, panogona kuve nekumwe kusiyanisa mune fungidziro dzePER. Nekuti zvirokwazvo, kana mari inotarisirwa yekambani ikawedzera iyo PER ichaenda pasi. Asi zvinopesana, kana njodzi yekambani ikawedzera, iyo PER inomuka. Ichi chinhu chichava chinobatsira kwazvo kuvhura zvinzvimbo mumusika wemasheya chero nguva yegore. Nekuti zvakare iri yakapusa sisitimu yekushandisa kana iwe wafananidza iwo mafemo umo muyero wemutengo uye muhoro pamugove unofamba.
Kusvika pakuti inogona kushandiswa kusarudza kukosha pane vamwe, asi izvo zvinonyatsoratidza kuti iri sarudzo yakachipa. Hazvishamise kuti zvichareva kuti iine rwendo rwepamusoro kumusoro kupfuura zvimwe zvirevo mumatanho. Unogona kuishandisa kuita kuti yako wega zvinhu zviwane purofiti kubva ikozvino. Kunyangwe iine zvinodzivirira zvine musoro mune izvi zviitiko. Nekuti hongu haisi iyo nzira isingakundike, kure nazvo. Sezvo iine mimwe mimvuri yaunofanira kufunga nezvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndeipi iyo PER uye inoshandiswa sei kushanda pamusika wemari?
Maitiro ekudzivirira zvikanganiso zvegore rapfuura?
Monero (XMR), iyo cryptocurrency yakazvarwa muna 2014